संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा के छ ?
काठमाडौं, मंसिर १५ – सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिएपछि मंगलबार राति विधेयकको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गराउनुभएको हो । कानुनमन्त्री अजय शङ्कर नायकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित...
१० राज्यमन्त्री थपिँदै
काठमाडौं, मंसिर १५ – मन्त्रिपरिषदमा बुधबार नेपाली कांग्रेसका १० राज्यमन्त्री थपिँदैछ । कांग्रेसले सिफारिस गरेका राज्यमन्त्रीलाई बुधबार शपथ गराउने तयारी छ । कांग्रेसबाट राज्यमन्त्रीको सिफारिसमा पर्नेहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईमा दीपक खड्का, उद्योगमा कञ्चनचन्द्र बादे, सिंचाईमा सुरेन्द्र आचार्य, वाणिज्यमा मिठु मल्ल, श्रममा दिलीप गच्छदार, वनमा सीताराम मेहता,...
भावी रणनीति बनाउन एमालेको बैठक बस्दै
काठमाडौं, मंसिर १५ – सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि भावी रणनीति तय गर्न नेकपा एमालेको संसदीय दल र पदाधिकारीको बैठक बुधबार बस्दैछ । बैठकले सडक र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निर्णय गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमालेले कसैको प्रायोजन र निर्देशनमा संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै बिरोध गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि विधेयकमा...
शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरले ओपिडीमा काम नगर्ने
मंसिर १० – अनशनमा रहेका डा। गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आवासीय डाक्टरले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन् । ओपिडी सेवा शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतकै भएकाले शुक्रबारदेखि सेवा बहिष्कार गरेको आवासीय डाक्टरले बताएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा साढे दुई सयको हाराहारीमा आवासीय डाक्टर छन् । उनीहरुले...
कार्की अदालत हाजिर
कार्तिक ३०, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अदालत हाजिर भएका छन् । मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत पुगेर कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । उनीमाथि म्याद तामेलीमा अवरोधको योजना बनाई प्रतिकार समूह परिचालन गरेको आरोप थियो । सुटुक्क सर्वोच्च अदालत पुगेका उनले लिखित जवाफ बुझाएर फर्केका छन् । उनीविरुद्धको...
तरुण दलको महाधिसेनबाट आज नेतृत्व चयन गरिने ।।
३० कार्तिक २०७३, सोलु एफएम, सोलुखुम्बु । पोखरामा जारी नेपाल तरुण दलको महाअधिवेसनबाट आज नेता छानिने भएको छ । प्रमुख तीन नेताहरुबीच सहमतिपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । पदको भागबण्डा मिलेपछि सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी छ । तरुण दलको आगामी नेतृत्वका लागि नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री जितजंग...
तामेल भयो लोकमानको म्याद
२ कात्तिक, काठमाडौं । करिव एक महिनाको लामो प्रयासपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको म्याद तामेल भएको छ । करिव एक महिनाको लामो प्रयासपछि सोमबार बानेश्वरस्थित कार्कीको घरमा म्याद तामेल भएको प्रतिवेदन मंगलबार अदालतमा प्राप्त भएको छ । अब मुद्दा पेशीमा चढ्ने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० की सचिव सरिता राईको रोहबरमा...
व्यवसायीबीच विवादका कारण अनिश्चितकालिन यातायात बन्द
महेन्द्रनगर, कात्तिक २ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा यातायात व्यवसायीबीच विवाद बढ्दै गएपछि सम्पूर्ण यातायात सेवा ठप्प भएका छन् । कञ्चनपुरमा नयाँ यातायात प्रालिले सेवा शुरु गरेपछि भएको विवादले उग्ररुप लिंदा सम्पूर्ण यातायात सेवा नै ठप्प भएको हो । नमस्ते शुक्लाफाँटा यातायात प्रालिले सेवा सञ्चालन गरेपछि महाकाली, पवनदूत र महाकाली टेम्पु यातायात व्यवसायी समितिबीच विवाद...
प्रधानमन्त्री निवास अगाडी अस्थायी शिक्षकद्वारा धर्ना
काठमाडौं, कात्तिक २ । सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना दिएका छन् । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन संघर्ष समितिले अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने, सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना स्थायी सेवामा गर्नुपर्ने, स्थायी हुने अवसर नपाएका शिक्षकलाई औषधि उपचार खर्च र...
सिमाना निर्धारण आयोगकै सदस्यबाट इलाकालाई मापदन्ड बनाउने निर्णय अस्वीकार
काठमाडौं, कात्तिक २ । गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले इलाकालाईसमेत प्रमुख आधार बनाउन सरकारले दिएको मापदन्ड अस्वीकार गरेका छन् । आयोगद्वारा पूर्वप्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको संख्या तोकिएकामा त्यसमा तराई–मधेस र थरुहट पक्षको असन्तुष्टिलाई समर्थन गर्दै अधिवक्तासमेत रहेका...
सर्वोच्चले लोकमानका ज्वाइँलाई समेत अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने !
२ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न खोज्दा अवरोध गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्न सक्ने एक अधिकारीले बताएका छन् । सर्वोच्चको टोली पुरानो बानेश्वरस्थित कार्कीको घरमा म्याद तामेलीका लागि जाँदा सोमबार केही मानिसहरुले अवरोध गरेका थिए । जसमा कार्कीका कान्छा ज्वाइँ प्रवल थापा पनि थिए । उनी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल...
लोकमानको घरमा म्याद नटाँस्ने कर्मचारीलाई १५ दिन जेल र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको चेतावनी
२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेली नगरी र्फकने तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीसहित तीन जनामाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तामिलदार खत्रीले बहानाबाजी गरेर म्याद तामेल नगरेको आशंका गर्दै अदालतले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए १५ दिन जेल र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । सातदिने...
मनासलु पदमार्गमा पहिरो, एक विदेशीसहित चारको मृत्यु, ६ गम्भिर
आश्विन ६, २०७३- मनासलु पदमार्गको उहिया गाविसस्थित तातोपानी र केरौंजा–९ जोड्ने पुल नजिकै दोभार भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा एक विदेशी पर्यटकसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान करिब ८ बजे पहिरो गएको स्थानीयले जनाएका छन् । पहिरोमा परि स्पेनिस नागरिकसहित ओखलढुङ्गा घर भएकी क्यान, नेपाल बस्ने २५ वर्षिया रञ्जना बस्नेत, पर्यटक गाईडहरु गोकर्ण काठमाडौं बस्ने ३५ वर्षीय...
पहिरोले सवारी साधन चलेन, सोलुखुम्बु काठ्माण्डौ ओहोरदोहोर प्रभावित
राजधानी र तराई दुवैतर्फ जाने सडकको दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएपछि ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुबाट कुनै सवारी चल्न सकेका छैनन् । लगातारको वर्षाले मध्यपहाडी राजमार्गको घुर्मी–खुर्कोट सडक खण्ड र सिद्धिचरण राजमार्गको घुर्मी–कटारी सडकखण्ड दुवैपट्टी सडक अवरुद्ध भएपछि यात्रुहरुमा मारमा परेका छन् । बुधबार उदयपुरको हर्देनी–२ लप्सेस्थित ठाँटीपहिरोको दक्षिण तर्फको...
कर्मचारीको विरोधपछि प्राधिकरण प्रमुख गामी रिहा
आश्विन ५, २०७३- कर्मचारीको विरोधपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण धादिङ शाखा प्रमुख सत्यनारायण गामी रिहा भएका छन् । पक्राउ परेको करिब चार घण्टापछि गामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छाडेको हो । आफ्ना कार्यालय प्रमुखलाई बिना कारण पक्राउ गरेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी जिल्लाभर बिजुली बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर, टहरा बनाएका संघ,...